Indostria isaky ny distrika | NewsMada
Indostria isaky ny distrika
Ao anatin’ny fandaharanasan’ny minisiteran’ny Indostria, ny varotra sy ny asa tanana ny fandrindranasa hisian’ny indostria isaky ny distrika. Efa tetikasa fanaon’ireo firenena mandroso izany, ary tohanan’ny Onudi (Firenena mikambana miandraikitra ny indostria). Manana mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy mpamatsy vola ho an’izany isika, raha ny voalazan’ny minisitera.
Miankina amin’izay misy ao amin’ilay distrika ny indostria hapetraka ao an-toerana. Samy manana ny mampalaza azy ny faritra tsirairay : kafe, voankazo isan-karazany, jirofo, lavanila, harena an-kibon’ny tany, harena anaty ranomasina, fizahantany, fambolena hafa, fiompiana, sns… Azo ahodina eto an-toerana daholo ireo hampihena ny fanafarana entana be loatra, sady mandany vola no fatiantoka ho an’ny toekarena eto an-toerana.
Manana tetikasa fananganana faritra indostrialy ny fitondrana. Lehibe izany faritra indostrialy izany, 1380 ha, miampy fananganana tanàna vaovao. Hiteraka famoronana asa izany no hampihena fifindra-monina, satria any amin’ny kaominina maro, tsy ahitana lalam-pihariana ka mifindra aty an-dRenivohitra sy an-tanàn-dehibe hafa ny maro. Izay vokarin’ireo indostria ireo ho an’ny mpanjifa eto an-toerana sy haondrana any ivelany.
Najoro ny Apex
Ho an’izay fanondranana izay indrindra, najoro ny Apex (Agence de promotion des exportations à Madagascar) hanenjehana ny tsena any ivelany. Madagasikara efa mpikambana ao amin’ny Comesa, Sadec, COI … tsena azo idirana daholo ireny, ankoatra ny any Eoropa, Etazonia, Azia. Fepetra takina manomboka amin’ny mpamboly sy ny mpandraharaha, ny fikajiana ny kalitao, ny fisian’ny vokatra azo antoka amin’izay tsy manana ahiahy ny mpanafatra, ary ny vidiny afaka mifaninana amin’ny hafa.
Tsara marihina anefa fa tsy miankina amin’ny minisiteran’ny Indostria, ny varotra sy ny asa tanana irery izany, fa eo ny minisitera hafa, indrindra ny misahana ny asa vaventy sy ny famokarana angovo ; ny fambolena, ny fiompiana sy ny jono. Ahoana ny fandrindranasa eo amin’ireo samy minisitera ireo ?